Akụkọ - Dịka akụkụ nke ọrụ ChemCycling, BASF tinyere nde euro 16 na taya pyrolysis mmanụ ụlọ ọrụ Pyrum
Dịka akụkụ nke ọrụ ChemCycling, BASF tinyere nde euro 16 na taya pyrolysis mmanụ ụlọ ọrụ Pyrum
BASF SE tinyere nde euro 16 na Pyrum Innovations AG, ụlọ ọrụ ọkachamara na teknụzụ pyrolysis n'efu, nke dị na Dillingen / Saarland, Germany. Site na itinye ego a, BASF ga-akwado mgbasa nke Pyrolysis osisi na Dillingen na nkwalite nke teknụzụ.
Pyrum na-arụ ọrụ ugbu a osisi pyrolysis maka scrap taya, nke nwere ike ịhazi ihe ruru tọn 10,000 nke taya kwa afọ. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2022, a ga-agbakwunye ahịrị mmepụta abụọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ugbu a.
BASF ga-anabatakarị mmanụ pyrolysis ma jiri ya dị ka akụkụ nke usoro nhazi usoro dị ka akụkụ nke ọrụ imegharị kemịkal iji hazie ya na ngwaahịa kemịkal ọhụrụ. Ngwaahịa ikpeazụ ga-abụkarị maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ plastik ndị na-achọ plastik dị elu ma na-arụ ọrụ dabere na ihe eji emegharị.
Na mgbakwunye, Pyrum na-ezube iwulite osisi pyrolysis ọzọ ike ya na ndị mmekọ nwere mmasị. Ntọala mmekọrịta ga-eme ka ụzọ gaa ngwa ngwa site na iji teknụzụ pụrụ iche Pyrum na mmepụta ihe. Ndị na-emefu ego n'ọdịnihu nke teknụzụ a nwere ike ijide n'aka na mmanụ pyrolysis e mepụtara ga-etinye obi gị dum na BASF ma jiri ya mepụta ngwaahịa kemịkal dị elu. Yabụ, imekọ ihe ọnụ ga-enyere aka mechie usoro mkpofu plastic na-azụ ahịa. Dị ka DIN EN ISO 14021: 2016-07 si kwuo, a na-akọwa taya taya dịka ihe mkpofu plastik na-azụ.
BASF na Pyrum na-atụ anya na, yana ndị mmekọ ndị ọzọ, ha nwere ike iwulite ihe ruru 100,000 tọn nke ikepụta mmanụ pyrolysis site na taya na-abaghị uru n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
BASF kpebisiri ike iduga ngbanwe nke ụlọ ọrụ plastik na akụ na ụba okirikiri. Na mbido eriri igwe uru, iji dochie ihe ndi ozo site na iji ihe eji emeghari ohuru bu uzo bu isi na nke a. Site na ntinye ego a, anyị emeela ihe dị mkpa site na ịtọ ntọala sara mbara maka mmanụ pyrolysis na ịnye ndị ahịa ngwaahịa nke azụmahịa dabere na kemịkalụ plastik ejizigharị.
BASF ga-eji pyrolysis mmanụ nke taya na-ekpofu ihe dị ka ihe mgbakwunye maka mmanụ na-ekpofu plastik agwakọtara, nke bụ ogologo oge nke ọrụ imegharị kemịkal.
Ngwaahịa emere site na mmanụ pyrolysis site na iji usoro ihe eji eme ihe nwere otu njirimara dịka ngwaahịa emere site na iji akụrụngwa akụrụngwa. Na mgbakwunye, ha nwere akara ụkwụ carbon dị ala ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ọdịnala. Nke a bụ nkwubi okwu nyocha nke Life Cycle Assessment (LCA) nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ Sphera n'aha BASF.
Nyocha LCA karịsịa nwere ike igosi na enwere ike iji ọnọdụ a mepụta polyamide 6 (PA6), nke bụ polymer plastik, dịka ọmụmaatụ, maka imepụta akụkụ dị elu na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. E jiri ya tụnyere otu tọn PA6 e ji eme ihe site na iji ihe ndị nwere mmanụ, otu ton PA6 mepụtara site na iji Pyrum tire pyrolysis mmanụ site na usoro nhazi usoro na-ebelata ikuku carbon dioxide site na 1.3 tọn. Ala umu anwuru na-ewepu site na izere igba oku nke ahihia ahihia.
E bipụtara na October 5, 2020 na Life Cycle Analysis, Azụ ahịa, Plastics, Recycling, Taya | Permalink | Nkwupụta (0)
Imefusị Taya Recycling Machine, Taya Pyrolysis, Imefusị rọba, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Ogbe Pyrolysis Osisi,